Ntụle njem ụgbọ mmiri | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe ogologo chere na Obi iru ala Ọrịrịrịrịrịrịrịrịrị na ọrịre n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, gụnyere Spain. Maka ndị na-amaghị akụkọ ihe mere eme nke Amazon eReader a nke ọma, anyị nwere ike ịgwa gị na agbanyeghị na egosiri ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ gara aga, ọ bịaghị na obodo anyị ruo izu ole na ole gara aga, mgbe ọ gafere ọtụtụ nsogbu. na agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na-agba ọsọ Jezz Bezos emebeghị ka ọha na eze mara.
N'ime ụbọchị ndị a, anyị enweela ohere ịnwale akwụkwọ elektrọnik ọhụrụ a iji nye gị nyocha ị ga-ahụ n'okpuru. N'ime ya anyị ga-enye gị nnukwu ozi gbasara njem, ọtụtụ onyonyo ka inwee ikele ekele maka etu o siri jiri nlezianya mee yana echiche anyị banyere ngwaọrụ a nke anyị nwere ike ịsịla na ọ dabere na izu oke, mana na ọ bụrụ na oke ọnụ ahịa.
1 Ekike, isi nkuku nke ụdị ụgbọ mmiri a
2 Ihuenyo; oke nkọ na mkpebi
3 Akụrụngwa na Batrị
4 Ngwaọrụ njikwa na nhọrọ
5 Ihe m mere na njem njem
6 Ọ bara uru ịzụta Kgbọ njem Ọdịdị?
Ekike, isi nkuku nke ụdị ụgbọ mmiri a
Ọ bụrụ na otu ihe, njem a nke Kindle pụtara, ọ dị elu karịa atụmatụ niile, n'ihi na na njedebe na ngwaọrụ a anyị nwere ike ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọzọ dịka Kindle Paperwhite ma ọ bụ nke ọ bụla nke Kobo ngwaọrụ. Otú ọ dị, ihe anyị na-agaghị ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a, bụ na nchekwa zuru oke na-akpachapụ anya na ọ na-enye anyị na njedebe na ihe ndị dị adị dị ka magnesium.
Na mgbakwunye na iji ihe eji eme ihe dị elu, emekwara ya ka ọ maa mma ma nwekwaa mmetụ dị mma n'aka. Ozugbo ị jidere njem ụgbọ mmiri a n'aka gị, ị ghọtara ngwa ngwa na ịnweghị ngwaọrụ ọ bụla n'aka gị.
Ngwaọrụ a nwekwara ihe dị iche na nke ahụ Ọ nwere otu bọtịnụ anụ ahụ, bọtịnụ gbanye ma gbanyụọ, nke dị n'azụ, na-ahapụ ihu n'ihu maka ihuenyo ahụ. Na okpuru ala bụ njikọ microUSB maka ichaji ngwaọrụ ma ọ bụ nyefee eBooks na data na kọmputa.
Na onyonyo dị n’okpuru, anyị ga - ahụ bọtịnụ anyị na - ekwu maka ya yana otu n’ime nkọwa kachasị njọ banyere njem ụgbọ mmiri a, nke bụ warara na - egbuke egbuke nke na - enweghị uru ọ bụla na - etinye ụbọchị ahụ unyi, mgbe ị na - etinye mkpịsị aka.
Iji mechie obere nyocha a nke Kindle Voyage anyị ga-egosi n'ihu, na aka ekpe na aka nri ihe mmetụta anọ nke ga-eme ka anyị nwee ike ịtụgharị peeji ahụ na nke na-adọta uche ngwa ngwa ozugbo anyị wepụtara eReader a na igbe. Anyị nwere ike ịhụ ihe mmetụta ndị a na foto na-esonụ.
Ihuenyo; oke nkọ na mkpebi
Ihuenyo bụ ihe ọzọ dị ukwuu nke ike njem a na nke ahụ bụ na Amazon jisiri ike rụọ nnukwu ọrụ. Y’oburu n’inwale akwukwo nke ihe omuma, igha achota oke odi nkpa na nkpebi nke enyo na ngwa a, ma obu na Kindle Voyage akụkụ abụọ a abawanyela nke ọma na afọ ojuju nke ndị ọrụ.
Site na nha nke 6 sentimita asatọ, nke yiri nke ngwaọrụ ndị ọzọ na-ere n'ahịa, na mkpebi nke 300 dpi, ihuenyo Voyaga nwere ọtụtụ akụkụ nke eReader ma na-enye ihe karịrị ahụmịhe na-atọ ụtọ.
Tụkwasị na nke ahụ, otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ Amazon eReader ọhụrụ a bụ ohere nke ịchịkwa ihie na-akpaghị aka dabere na ọkụ nke dị na ebe anyị ga-agụ. Mgbe m nwesịrị ya enwere m ike ịgwa gị nke ahụ a auto nchapụta mode na-arụ ọrụ nke ọma, ọ bụ ezie na dabere na nke ọ bụla, ọ nwere ike bụrụ na ị họrọ oke na-enwu gbaa ma ọ ka mma iji aka họrọ.
Akụrụngwa na Batrị
Ọhụrụ a Amazon Kindle abawanyela nke ọma n'ụzọ ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ndị bu ya ụzọ na otu n'ime ihe atụ nke a bụ nhazi ọhụrụ nke na-arịgo n'ime, dị ike karị, na ọsọ nke 1 GHz na nke ahụ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ọbụlagodi ịgụ akwụkwọ dijitalụ. Ihe nchekwa nchekwa 1 GB na-akwado ya na-eme ka Voyage a bụrụ otu n'ime akwụkwọ elektrọnik kachasị ike na ahịa.
Oghere nchekwa dị n'ime nke ngwaọrụ a adịchaghị elu, 4 GB, kama ọ bụ karịa iji chekwaa nnukwu ọbá akwụkwọ nke akwụkwọ na usoro dijitalụ. Oge nke a Anyị agaghị enwe ike ịgbasa oghere a site na iji kaadị microSD ebe ọ na-adịghị na-enye nhọrọ. N'aka ozo, ma n'ihe banyere ichoro oghere, anyi nwere ike iji otutu oru nchekwa igwe ojii nke ugbua di iri na abuo, tinyere nke Amazon.
Banyere batrị, nke na-abụghịkarị nsogbu n'ụdị ngwaọrụ a, n'adịghị ka ihe atụ ngwaọrụ mkpanaka, njem a nke a na-enye anyị ọtụtụ izu, ọ bụ ezie na ọ dabere na onye ọrụ ọ bụla ebe ọ bụ na ụdị akwụkwọ elektrọnik nwere Igwe kwụ ọtọ nwere ikike ga-adabere na ogo ọkụ anyị ji.
Ikekwe otu onye ọrụ ga-enweta nnwere onwe nke ọtụtụ ọnwa na onye ọrụ ọzọ na-agụ ọtụtụ awa kwa ụbọchị ma na-enwu ọkụ mgbe niile, nwere ike ọ gaghị enweta ndụ batrị karịa izu abụọ.
Nyocha anyị bụ na batrị nke Kindle Voyage ruru ọrụ ahụ, ọ bụ na mgbe anyị gwusịrị ya ruo ọtụtụ ụbọchị, anyị enweela nnwere onwe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu 3.
Ngwaọrụ njikwa na nhọrọ
Kgbọ njem a ọ dị mfe iji ma ghara ibute nsogbu ọ bụla maka onye ọrụ ọ bụla ebe ọ bụ na ọ dị mfe ijikwa ọ bụ ezie na ejibeghị ụdị ngwaọrụ a.
Banyere nhọrọ ndị eReader a, ọ dị nnọọ iche na ngwaọrụ ndị ọzọ nke ụdị a. Anyị nwere ike ịgbanwe etu fọnti, font ahụ n’onwe ya ma ọ bụ detuo ya, yana chọọ okwu ọ bụla nke anyị na-aghọtaghị ihe ọ pụtara n’akwụkwọ ọkọwa okwu.
Ihe m mere na njem njem
Mgbe m nwalere njem ụgbọ mmiri a ruo ọtụtụ izu, echiche m enweghị ike ịdị mma karịa, ọ bụkwa na yana atụmatụ kachasị elu nke ngwaọrụ a, nke m na-achọghị ịma n'ihi na m na-ebu eReader m mgbe niile n'okwu na-egbochi ya si na ahuru, ike ya, mkpebi na nkọ nke ihuenyo na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ịgụ dijitalụ n'ụzọ siri ike ịkọ.
Aga m akọwa ya na ngalaba na-esote, mana Ọ bụrụ na mmadụ jụọ m ụdị eReader ị ga-azụ, echere m na m ga-akwado njem njem a, ma ọ bụrụ na ị chọghị imefu ego a Kdị a kwesịrị (189.99 euro na nke kachasị ya).
Ọ bara uru ịzụta Kgbọ njem Ọdịdị?
Ajụjụ a nwere n'ezie mgbagwoju anya azịza Nke a bụ na ọ bụrụ na anyị elelee naanị nkọwa, ọrụ na nhọrọ nke njem ụgbọ mmiri a na-enye anyị, azịza ya ga-abụ ee. O di nwute na ịzụta ihe omuma ihe omuma obula onu ahia abia, nke bu ihe banyere eReader di oke oke.
Na nke bu eziokwu bu na n’agbanyeghi na o nwere oke okike na ike di uku na nkenke, enweghi otutu ihe di iche na ngwa ndi ozo di iche a, nke nwere onu ahia di ala. Ọ bụrụ na inwere ego ma ọ bụ na ị chọghị itinye ya na eReader nke ị ga-eji ma nwee ọ forụ maka afọ ndị na-abịanụ, njem njem dị mma nke ọma ịzụrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị ego iji chekwaa na ịgaghị eji akwụkwọ elektrọnik oke, ihe ịrụ ụka adịghị ya na nhọrọ gị kwesịrị ịbụ ngwaọrụ ọzọ.
Nke a Ighara ichefu na ọ bụ naanị uche m nakwa na onye ọ bụla kwesịrị iji ihe ha chọrọ na ihe ha chọrọ kpọrọ ihe, karịchaa ego ole ha ga-eme. Ọtụtụ n'ime unu agaghị ala azụ mgbe ịzụrụ eReader a na ndị ọzọ agaghị echekwa ohere ịzụrụ njem njem.
Mgbe nsogbu nkesa izizi rutere na ahịa ya, A na-ererịrị Kindle Voyage a n'ọtụtụ mba gburugburu ụwa, gụnyere Spain. A na-enweta ya n'ụdị abụọ dị iche iche, dịka akwụkwọ Aamazon niile, nke nwere njikọta WiFi yana nke ọzọ na 3G..
Ọnụahịa ha dị n'ọnọdụ abụọ dị elu maka ngwaọrụ nke ụdị a na nke ikpe Voya nwere otu njikọ ruru euro 189.99. Maka njikọta na WiFi na 3G, ọnụahịa ahụ na-agbapụ ruo euro 249.99.
Nwere ike ịzụta ụdị abụọ ahụ site na njikọ ndị a:
WiFi Kindle Voyage WiFi
Obiọma Voyage 3G
Kedu ihe ị chere gbasara njem ụgbọ mmiri a mgbe ị gụchara nyocha anyị zuru ezu?. Nwere ike inye anyị echiche gị na oghere edebere maka nkwupụta ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta ọ bụla anyị nọ ugbu a. Anyị ga-achọ ịmata ma ị ga - etinye ego ole eReader a bara uru ka ị ga - ahọrọ ịhọrọ ngwaọrụ ọzọ site na ole dị na ahịa yana nke nwere ọnụ ala dị ala karị.
Njirimara na ngosipụta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Njem ụgbọ mmiri, eReader zuru oke na ọnụahịa na-adịghị mma
Mụ na nwa a nọrọ ihe karịrị otu ọnwa ugbu a, enwere m ike ịsị na enweghị obi abụọ ọ bara uru, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-agụchi anya. A lara m ezumike nká Sony PRS 650 maka njem ahụ ma enwere m obi ụtọ.
Otu esi ehichapụ ngwa na Windows 10